Sida ay u gudubto – somali
Qaaxadu waa cudur ku faafa isogoo u kala gudba dadka, qof ilaa qof oo hawada raacaya. Daawaynta oo sax ah ayaa hoos u dhigi karta fiditaanka cudurka.
Bakteriada qaaxada waxa ay gashaa hawada marka qofka qaaxada qabaa hadlo, qufaco ama heeso. Dadka kale ee la degan isla guri ama isla qol ayaa neefsan kara hawdaas deedna qaadi kara cudurka.
Sikastaba ha ahaatee dadka qaba xanuuka qaaxadu sida ay u dhanyihiin cudurka ma faafiyaan. Bacteriada qaaxada waxa faafiya kuwa cudurku uu kaga dhacay dhuumaha neefisiga, inta badan sambabada, kuwaas oo ay xaagadooda ay kujirto bagterriada qaaxadu.
Qaaxadu si dhibyar looma kala qaado. Xubnaha qoysaska meel kuwada nool ayaa haalista ugu wayn ku jira. Halista qaadistu aad ayay u hoosaysaa marka ay tahay in lala kulmay qofkii gudbinaya. Waxa curudku u gudbaa sedex daloolkiiba meel marka la eego daka la kulmay qof qaba cudurka.
Qaaxada laguma kala qaado, weelka, cabida, cuntada, dharka iyo feernijarka dushooda iyo gidaarada.
Khatarta in cudurku faafo waxa lagu yarayn karaa: In degdeg loo qiimeeyo in qofka bukaa uu qabo xanuuka qaaxada. Isagu/Iyadu waa in ay raaco/raacdo talada sida daawada loo qaadanaayo si taxadarle. Marka qofka bukaa barto in uu u qufaco si uu u badaadin karo dadka, wax ay hakinaysaa in bakteriadu u gudubto hawada. Hawada oo loo furo qolka ama daaqadaha oo la furo waxay yaraynaysaa tirda bakterida hawada qolka ku jirta. Debeda inta badan majirto khatarta faafinta cudurku.